Ukuphindaphinda kwe-YouTube - Amavidiyo we-YouTube alula kalula - Lalela umculo ngaphandle kokuphazamiseka
I-Loop futhi Phinda amavidiyo e-YouTube
Phinda udlale amavidiyo we-Youtube ngaphandle kokucindezela okuthi
Amavidiyo we-Loop YouTube ngendlela elula. Usebenzisa i-YouTube Loop ungaphinda ividiyo ephelele noma ukhethe ingxenye yayo, useshe ku-YouTube, uqale amavidiyo amaningi ngasikhathi sinye!
Sesha noma wenze i-YouTube Phinda.
Phinda amavidiyo e-YouTube agcwele noma ahlukile usebenzisa i-YouTube Loop
I-YouTube Repeater ivumela noma ngubani ukuthi alule amavidiyo we-YouTube noma izingxenye zamavidiyo ezinesikhathi sokuchofoza nje igundane. Phinda unaphakade amavidiyo omculo, izigcawu zevidiyo ezihlekisayo, noma amavidiyo avelele njengeziko lezicishamlilo noma izindawo zasemanzini, bese wabelana ngazo nabangani bakho!
Ungayibeka kanjani ividiyo ye-YouTube ephindaphindwayo?
Isebenziseka nini ividiyo ye-YouTube ku-loop engapheli
∞ Uma ubuka ividiyo ye-YouTube efundisayo futhi udinga ukubuka ingxenye ethile yayo kaninginingi.
∞ Uma usuzwile umculo okuluthayo umlutha wokuthi kufanele ulalele kaninginingi ...
∞ Lapho kufanele ubuke leyo vidiyo ehlekisayo yesikhathi se-1000 ngaphandle kokuthatha isenzo ngethuluzi.
∞ Lapho ufuna ukubuka amavidiyo e-YouTube ngaphandle kwezikhangiso.
Inkinobho Yokuphinda i-YouTube
Thola Inkinobho Yokuphinda i-Youtube ye-Chrome, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge.
∞ Phinda i-YouTube ← Hudula lokhu kubha yakho yokubekisa amabhukumaka
❝Lo mbhalo usiza ukuqaqa amavidiyo we-YouTube ngokuzenzakalela.❞
Usebenzisa i-YouTube Loop ongayenza
Phinda, Sika futhi Ulengise
Laop wonke amavidiyo we-YouTube noma ubeke izingxenye zawo eziphindaphindwayo, bese wabelana ngendalo yakho nabangane bakho!
Phinda amavidiyo we-YouTube ngokuzenzakalelayo (noma izingxenye zawo, ngaleyo ndaba)
Bukela ividiyo yakho oyithandayo ye-YouTube kaninginingi ngaphandle kokucindezela okuphindwayo.
Nqampuna, Sika Ingubo Engapheli
Dala i-Loop, nqampuna ingxenye oyithandayo yevidiyo bese udlala ngokugcwele noma izingxenye zamavidiyo e-YouTube ku-loop engapheli.
Yenza ngokwezifiso isikhathi se-loop yakho (isiqalo / isiphelo)
Ukusekelwa kwamapharamitha wesikhathi we-YouTube.
Uhlu lokudlalwayo lwe-Youtube
Dala uhlu lwakho lwadlalwayo ngaphandle kokungena ngemvume.
Isipele noma ubuyisele uhlu lwadlalwayo.
I-YouTube iphinda uhlu lwadlalwayo, isishidyo noma ibuyise uhlu lwadlalwayo lwe-YouTube.
Lawula amavidiyo alayishwe e-YouTube.
Isikrini esigcwele ngokuzenzakalela
Bukela i-YouTube kusikrini esigcwele ngaphandle kwezikhangiso kukhompyutha naku-smartphone.
Ikhula ngokuzenzakalela ukuze ilingane nesikrini sedivayisi
Shesha noma wehlise umoya
Yehlisa izingoma ze-YouTube noma usheshise amavidiyo.
Ngeza inkinobho yokudlala kusithonjana.
Shintsha isihloko ngaphambi kokwabelana.
Ulwazi lomsebenzisi olungiselelwe
Sesha amavidiyo e-YouTube ngendlela ekhululekile.
Azikho izikhangiso ezicasulayo.
Sekela Zonke Izikhulumi Ezithandwayo
Ungasebenzisa i-YouTube Looper kunoma iyiphi ipulatifomu yakho oyithandayo njengedivaysi yeWindows, i-Linux OS, umshini we-Mac, i-Chromebook, i-Android, noma i-iPhone, i-iPad, i-Smart TV.
Fast and free hhayi ukufutheka.
Kusetshenziswa ngokuphelele insiza eku-inthanethi ongayisebenzisa.
Awekho ama-akhawunti, akukho okulandwayo, umculo nje.
Amavidiyo we-YouTube wokuvula kalula - Lalela umculo ngaphandle kokuphazamiseka
Ungaphinde Uyenze kanjani amavidiyo we-YouTube ngokuzenzakalela
Kunezindlela zokuthola imikhawulo ephindaphindwe ye-YouTube
Sesha ividiyo oyithandayo noma faka i-URL ye-YouTube (noma i-ID yevidiyo) yevidiyo ofuna ukuyiphinda ebhokisini lokufaka elingenhla. Noma usebenzise i-Youtube ukuphinda ukuphamba ngezansi.
Buyisela incwadi t ngencwadi x esizindeni se-YouTube bese ucindezela Enter. Ividiyo yakho izophinda iqhubeke ngokulandelana.
- Ividiyo ejwayelekile etholakala kwi-YouTube
- Uhlobo lweselula
- Izixhumanisi zezwe (uk, jp, ...)
- I-URL efushane
Ungayenza Kanjani ividiyo ye-YouTube edlala ngokuqhubekayo
I-YouXube ikuvumela ukuthi udale iLop ukuphinda ividiyo ephelele noma ingxenye ethile yayo. Ukwenza i-Loop ungakhetha ividiyo ngenye yezindlela ezilandelayo:
Isinyathelo sokuqala: Khetha ividiyo
Ukuphinda amavidiyo we-YouTube, mane unamathisele i-URL yevidiyo ye-YouTube endaweni yokusesha.
Kusuka kumphumela wokusesha
Uma ungaqiniseki ukuthi iyiphi ividiyo ofuna ukuyilayisha, ungasesha amavidiyo we-YouTube. Ekhasini elilandelayo uzothola imiphumela yosesho ongakhetha kuyo ividiyo oyithandayo.
Isinyathelo sesibili: Sika
Loop ividiyo ye-YouTube phakathi kwezinhlaka zesikhathi
Khetha ukuqala / ukuphela
Uma ukhethe ividiyo yakho, ungashintsha izikhathi zokuqala nezokugcina. Mane nje uhudule izinkomba zokuqala nokuqedela ezikhathini ongathanda. Manje usungaphinda amavidiyo wakho owathandayo we-YouTube.
Ngokuzenzakalelayo, izikhathi zokuqala / zokuqeda ziyizikhathi zokuqala / zokuqeda zevidiyo.
Isinyathelo sesithathu: Yenza isihloko sevidiyo ngokwezifiso
Qamba kabusha i-loop
Ungaphinde uyiqambe kabusha iLoop kunoma yini ongathanda ukuyenza. Vula i-Loop egciniwe, shintsha igama bese uchofoza inkinobho ethi Gcina.
Isinyathelo sesine: Yenza ngezifiso izithonjana zevidiyo
Ungabelana ngamavidiyo wakho we-YouTube akhawulelwe emithonjeni yezokuxhumana oyithandayo njenge: Facebook, Twitter, Pinterest, i-imeyili, kanye ne-WhatsApp noma imiyalezo.
Ngaphambi kokwabelana, dala isithombe sakho esincane se-YouTube samavidiyo wakho ukuze wenze abantu bakhange.
Ukuze usebenzise i-YouTube Loop kumele ube nesiphequluli esifanelekile se-HTML5.
Thola Imibuzo Yakho Nezimpendulo Lapha - Ungawubopha Kanjani amavidiyo we-Youtube?
+ Yini i-YouTube Loop?
Iyithuluzi lewebhu elidlala amavidiyo e-YouTube ngokuhamba okungenamkhawulo, okusho ukuthi: ividiyo iqala futhi ngokuzenzakalelayo ngaphandle kokungenelela ngemuva kokufika ekugcineni.
+ Ungawaphindaphinda kanjani noma uwahlukanise amavidiyo?
Ukuthola ividiyo ye-YouTube ukuze iphindaphindwe ku-loop kungazwakala njengomsebenzi oyisisekelo, kodwa ngokumangazayo kunzima ukwenza futhi kungashiya ababukeli abaningi bekhungathekile.
Ngenhlanhla, kunezindlela ezintathu ezilula zokuvula ividiyo yakho oyithandayo ye-YouTube noma i-movie trailer, futhi zonke zikhululekile ngokuphelele futhi zisebenza nawo wonke amapulatifomu, kufaka phakathi ama-smartphones e-iPhone ne-Android ne-Windows, Mac, ne-Linux.
• Indlela 1. Ku-YouTube: chofoza ngakwesokudla iwindi levidiyo bese uchofoza ku-Loop
• Indlela 2. Ku-YouXube:
- Sesha ividiyo usebenzisa ibhokisi lokufaka elingenhla ekhasini, bese ukhetha ividiyo eyodwa ohlwini lwemiphumela.
- Kopisha i-URL yevidiyo ye-YouTube ongathanda ukuyivula bese ubeka i-URL yevidiyo ye-YouTube ebhokisini lokufaka ngaphezulu kwekhasi bese ucindezela isithonjana se-infinity ∞
- Kopisha i-ID yevidiyo ongathanda ukuyivula bese ufaka umazisi wevidiyo ye-YouTube ebhokisini lokufaka ngaphezulu kwekhasi bese ucindezela isithonjana se-infinity ∞
• Indlela 3: Faka uhlelo lokusebenza lomculo lamahhala kwi-iPhone, i-iPad, noma i-iPod touch (kukhona neziphindaphindo ze-YouTube zamadivayisi we-Android).
+ Ungawavula Kanjani Amavidiyo we-YouTube kusuka kusiphequluli sewebhu?
Ingabe ikhona indlela yokubuka amavidiyo e-YouTube ngesivinini esingaphezu kwe-2x?
⓵ Njengamanje, i-YouTube isheshisa ukudlalwa kwevidiyo izikhathi ezi-2.
⓶ Qhafaza kwesokudla indawo yevidiyo, noma cindezela isikhathi eside uma usebenzisa isikrini sokuthinta.
⓷ Khetha iLoop kusuka kumenyu.
Ukusuka kuleli phuzu kuya phambili, ividiyo izovuleka ngokuqhubekayo uze ukhubaze isici se-loop, ongayenza ngokumane ukuphinda izinyathelo ezingenhla zokungakhethi inketho ye-loop, noma ngokuvuselela ikhasi.
+ Ungawavula kanjani amavidiyo we-YouTube ku-iPhone noma ku-iPad ngaphandle kokufaka uhlelo lokusebenza?
Kwikhompyutha yedeskithophu noma ye-laptop, i-YouTube ikuvumela ukuthi uphinde ukuphinda ividiyo oyibukayo ngokuzenzakalelayo. Ngokwengeziwe, kunezinsizakalo zamahhala, ezivela eceleni ezingakusiza ukuphinda amavidiyo.
Uma ufuna ukuzama enye indlela ehlukile yokuvula amavidiyo we-YouTube kwikhompyutha noma usebenzisa idivaysi enjenge-smartphone engakhombisi inketho yemenyu efihliwe, iwebhusayithi ye-YouXube iyindlela enhle.
I-YouXube iyi-webhusayithi yamahhala evumela noma ngubani ukuthi aqale ukuphinda ividiyo ye-YouTube ngokumfaka i-URL yevidiyo enkundleni yakhe yokusesha. Okuhle kunakho konke ukuthi lokhu kungenziwa kunoma yisiphi isiphequluli sewebhu kunoma iyiphi ithuluzi.
+ Ngikopisha futhi nginamathisela kanjani ama-URL e-YouTube kumadivayisi eselula?
Kukhompyutha, ungakopisha isixhumanisi ngokushesha ngesinqamuleli sekhibhodi Ctrl + C futhi unamathisele isixhumanisi ngesinqamuleli sekhibhodi Ctrl + V.
Kwidivaysi ephathekayo, cindezela ubambe bese ukhetha ikhophi noma unamathisele inketho.
+ Ingabe leli khasi lingabalingani be-YouTube?
Leli khasi alihlotshaniswa ne-YouTube.
Lesi siza akusona esisebenza ne-YouTube futhi akuyona indlela esemthethweni yokudlala amavidiyo we-YouTube uma usiphindaphindekile, kumane kungenye indlela yesithathu.
+ Kuphephile yini ukusebenzisa le nsizakalo yokuphinda i-YouTube?
Ukuphepha kuyinto eza kuqala kithi, ngakho-ke lonke ithrafikhi ledatha yale webhusayithi lifakwe nge-SSL. Ngale protocol yenethiwekhi evikelekile, idatha yakho ivikelekile ekufinyelelekeni ngabantu besithathu.
+ Ngabe iyathukuthela ividiyo ye-YouTube, ngenkathi uyibuka?
Qala kabusha isiphequluli sakho.
Hlola ukusetshenziswa kwe-CPU kwekhompyutha yakho noma ifoni noma ithebhulethi. Uma ubona kuphezulu kakhulu (ngaphezulu kuka-80%) zama ukubulala izinqubo ezithile, noma uqale kabusha idivayisi yakho.
Uma kungenzeka ushintshele kukhwalithi ephansi yevidiyo ye-YouTube (480p noma ngaphansi).
+Ungawabuka kanjani ama-YouTube YouTube nge-Slow Motion noma nge-Fast Motion?
Ungashintsha kanjani isivinini sokudlala kwevidiyo ku-YouTube?
Landela lezi zinyathelo
Vula noma iyiphi ividiyo ye-YouTube esipheqululini sakho
Bheka ngakwesokudla kwesidlali somdlali we-cog yezilungiselelo (kungasho i-HD ngaphezulu kwayo)
Chofoza kunketho yejubane (kufanele kube kokujwayelekile ngokuzenzakalelayo)
Khetha ijubane lakho lokudlala kabusha
Khuphula Ijubane: 1.25, 1.5, 2
Ngenye indlela, ungavula ividiyo ku-Youxube, enezinkinobho ezimbili zokukhuphula noma ukunciphisa ijubane kwisilawuli.
Lokhu futhi kuyimpendulo yemibuzo efana nale.
Ungasheshisa kanjani noma wehlise amavidiyo e-YouTube?
Ungawabuka kanjani amavidiyo we-YouTube ngesivinini esisheshayo?
Singathola yini ukwanda kwinketho yesivinini sokudlala?
Ungawadlala Kanjani Amavidiyo we-YouTube ku-Slow Motion noma ku-Fast Motion?
+ Ungasheshisela Kanjani Amavidiyo we-YouTube (2x, 3x nangaphezulu kwe-4x)?
Njengamanje, i-YouTube isheshisa ukudlalwa kwevidiyo izikhathi ezi-2.
+ Ungaguqula kanjani Ijubane Lokudlalwa kwe-YouTube ku-Android naku-iPhone?
Ngaphambi kokuthi siqale, qiniseka ukuthi uya esitolo se-App noma ku-Google Play bese ubuyekeza inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza lwe-YouTube.
Vula noma iyiphi ividiyo ye-YouTube kuhlelo lokusebenza
Thepha ividiyo ukuze ubone zonke izinkinobho ezimbozwe esibukweni
Thepha amachashazi amathathu ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini sakho. Lokhu kuzovula inqwaba yezilungiselelo zevidiyo.
Uhlu lwezilungiselelo, thinta Isivinini sokudlala. Kufanele isethwe ku Okujwayelekile ngokuzenzakalelayo.
Vele uthephe isivinini osifunayo, futhi nonke senisethiwe.
Uma kukhulunywa ngefoni yakho ephathekayo noma i-iPhone, uma ukhetha ukudlala amavidiyo e-YouTube kusidlali sewebhu (m.youtube.com) esikhundleni sohlelo lokusebenza leselula lendabuko, ungashintsha isizinda se-YouTube sibe yi-YouXube.
+ Ungayivula kanjani ividiyo ye-youtube iphuzu elithile?
Uyikhipha kanjani ividiyo ye-YouTube phakathi kwezinhlaka zesikhathi?
Hudula isilayidi esiku-Youtube reporter ukuze ulayishe ingxenye yevidiyo kuphela.
+ Ungalukhipha kanjani uhlu lwadlalwayo lwe-YouTube kuselula?
Vula noma yiluphi uhlu lwadlalwayo lwe-YouTube esipheqululini sakho
Shintsha isizinda se-YouTube sibe yi-YouXube futhi wonke uhleli.
Ithuluzi elilula lokuvula ividiyo le-YouTube
Ukwakha i-Loop akukaze kube lula ukwedlula lokhu! Inika amandla ukushintshwa okuzenzakalelayo kwevidiyo ye-YouTube noma ingxenye yayo ...
Uhlelo lokusebenza oluhle, izihibe zilusizo oluhle kakhulu lokufunda izingxenye zezingoma ukudlala noma ukucula.
Isazi Pathologist, London
Yikho nje ebengikufuna ukuphinda izingxenye zomculo njengoba ngidlala nazo ukuze ngizijwayeze. Isici sokwabelana sizokuba kuhle ukwaba izingxenye zevidiyo nabanye kunoma yiliphi iqembu labafundi / iqembu / iklabhu.
Uthisha omkhulu wesikole samabanga aphezulu, Paris
Ngisebenzisa lolu hlelo lokusebenza ukudala uhlu lwadlalwayo lwendlela yami yokuzivocavoca. Ungaphinda ithrekhi eyodwa noma ukhethe i-auto-play ekuvumela ukuthi ulalele wonke umculo ohlwini lwadlalwayo. Uhlelo lokusebenza oluthembekile.
Umhlaziyi Wezokuphepha Kwolwazi, Silicon Valley
Ngiyathanda ukuthi ungakha kanjani iluphu phakathi kwezikhathi ezithile zevidiyo! Ngokuqinisekile ingxenye engiyithandayo yohlelo lokusebenza.
Thanda lolu hlelo lokusebenza! Kwenza kube lula ukuvula izingoma zami engizithandayo!
Umeluleki Wezezimali, Amsterdam
Ngqo engangikudinga. Njengomfundi womculo, ngiyakwazi ukulalela izingoma ezizama ukufunda ku-loop ngaphandle kokuthi ngishaye kaninginingi ukudlala.
Ngiyathanda ukuthi uma ividiyo yinde kunendlela oyifunayo, ungayifushanisa. NGIYAWUTHANDA. Akukho glitches noma izikhangiso, angisiboni isizathu sokungayithandi.
Umthandi Womculo, Munich
Lolu uhlelo lokusebenza olukhulu olusebenza ngqo njengoba luchaziwe. Ngijabule kakhulu ngayo futhi ngiyayincoma.
Umculo engiwuthandayo futhi ngiwufaka ku-loop uvele ungigculise futhi ungisize ngikhululeke.
Isazi sezibalo, Barcelona
Uthando lolu hlelo lokusebenza lusiza kakhulu lapho ungatholi inguqulo enwetshiwe yengoma oyifunayo ku-YouTube ngiyabonga ngokwenza lolu hlelo lokusebenza.
Kuze kube manje, yilokhu kanye engangikudinga ukuhlukanisa nokusebenzisa izingxenye ezithile zesiginci.
Isazi sezengqondo, Rio De Janeiro
Ngithokozela ukusetshenziswa kwalolu hlelo lokusebenza oluhle kangaka, ngeshwa i-YouTube ayisekeli isici se-loop kepha ngiyabonga ngokwenza lolu hlelo lokusebenza.
Umakhi we-Computer Network, San Francisco
Kuhle kubaqalayo njengoba bengayikhulula futhi bafunde iculo kalula
Isebenza kahle kuwo wonke amavidiyo hhayi umculo kuphela.
Umphathi Wezimali, Florence
Iyaphinda ngaphandle kokuma ukuze ngilale kahle
Umakhenikha wezimoto, Toronto
Ilungele izinkulumo zolimi nokutadisha nayo. Ngiyakwazi ukulawula ijubane lokudlala noma lesinqumo.
Ukwabelana ngale webhusayithi kuyisisusa sohlelo lokusebenza ukuthuthukisa ezinye izinto eziningi ezisebenzisekayo
© YouXube 2019 - I-YouTube Player 0.0.1